Ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya oo tababar loogu soo xiray dalka Djibuti. – Radio Muqdisho
Ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya oo tiradoodu gaareysay ilaa 147 askari, islamarkaana muddo Sadex bilood ah tababar ku qaadanayay dalka ayaa shalay loo soo gebagebeeyay.
Xafladdii xiritaanka tababarkaasi ayaa waxaa ka hadlay saraakiil ka tirsan ciidanka Djibuti, kuwasoo kula dardaarmay ciidanka iney dadkooda ugu adeegaan aqoonta ay ka kororsadeen tababarka.
Ciidanka tababarka loo soo xiray ayaa la soo baray tabo muhiim ah oo ay isticmaalaan ciidanka booliiska, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen ka hortagga dembiyada, baarista meydadka, iyo sida looga hortago rabshadaha abaabulan.
Ciidankan ayaa lagu wadaa ineey maanta dalka dib ugu soo laabtaan, si ay uga qeybgalaan xuska sanadguuradii 71-aad ee ka soo wareegtay aas aaskii ciidanka booliska Soomaaliya oo ku beegan berri oo sabti ah.